မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ် | နေရီ
မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ်
December 22, 2009 at 10:23 am	(မြတ်ဗုဒ္ဓ၏ ၀ိပဿနာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ်)
အနောက်နိုင်ငံအသိုင်းအ၀ိုင်း၏ဓလေ့ထုံးစံအရအသက်(၂၁)နှစ်အရွယ်အထိလူငယ်ဟုသတ်မှတ်၍ အသက်(၂၁)နှစ် ကျော်လျှင် လူကြီးဟု သတ်မှတ်ကြသည်။ သင့်တင့် လျောက်ပတ်သော အတတ်ပညာ အသိပညာ ရှိသောအရွယ်ဟု သတ်မှတ်ကာ လူကြီးစာရင်းသွင်းကြခြင်းဖြစ်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့မြန်မာနိုင်ငံတွင်တော့ လူကြီးလူငယ်ဟု သီးခြားသတ်မှတ်ချက်ဟူ၍ တွေ့ကြုံကြားဖူးခြင်း မရှိပါ။ အသက်ကြီးလျှင် လူကြီး၊ အသက်ငယ်လျှင် လူငယ်၊ မူလတန်းပညာ မကုန်မီအထိတော့ ကလေး ဟုသာ အကြမ်း ဖျင်း သိမှတ်မိသည်။
အတတ်ပညာ အသိပညာလည်း ပြည့်စုံမှသာ လူကြီးဟု သတ်မှတ်ရလျှင်တော့ လူကြီး အတော် ရှားပါး မည့် သဘော ရှိသည်။
ယခုဆောင်းပါးသည် မြတ်ဗုဒ္ဓ္ဓဟောကြား ညွှန်ပြအပ်သော ၀ိပဿနာတရားတော်ကို လူငယ် လူလတ်များ သိရှိ အားထုတ်ခြင်း ပြုအပ် မပြုအပ် ဆိုသော အကြောင်းအရာကို ဆွေးနွေး တင်ပြလိုခြင်း ဖြစ်ပါသည်။
ဆောင်းပါး၏နောက်ပိုင်းတွင် မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားသော ၀ိပဿနာတရားစစ် တရားမှန်လည်းဖြစ်၍ လူငယ် လူလတ်များ နှင့်လည်း သင့်လျော်သော တရား အားထုတ်နည်းကိုပါ ထည့်သွင်း ဖော်ပြ ပေးမည်ဖြစ်ပါသည်။
https://nayyee.wordpress.com/wp-includes/js/tinymce/plugins/wordpress/img/trans.gifဆိုကြပါစို့။ အသက်အရွယ်(၈၀)ခန့် ရှိနေပြီဖြစ်သော အဘိုးအို (သို့မဟုတ်) အမယ်အို တစ်ယောက် သိန်းတစ်ထောင် ထီပေါက်ခဲ့သည်ဆိုပါစို့။ ထိုဆုလာဘ် ၏အကျိုးကို ထိုအဖိုးအို၊ ထိုအမယ်အို ကောင်းစွာ ခံ စား နိုင်ရန်မလွယ်တော့ချေ။
ထိုအဖိုးအဘွားအတွက် ကျပ်သိန်းတစ်ထောင်၏အကျိုးကို ကောင်းစွာခံစားနိုင်သော အခွင့်အရေး မရှိနိုင် တော့ပေ။ ငွေထုတ်ကို ပိုက်ထားရသည် မှန်သော်လည်း စားလိုတိုင်းလည်း မစားနိုင်၊ သွားလိုတိုင်းလည်း မသွား နိုင် တော့ အလာကောင်းသော်လည်း အခါနှောင်း၍ နေတော့မည်။
၀ိပဿနာတရားသည် သေခြင်းနှင့်ရင်ဆိုင်ရသောအခါ အသုံးဝင်သည်မျှသာမက အသက်ရှင်နေထိုင် နေ သမျှ ကာလပတ်လုံးလည်း အကျိုးပြုတတ်သောကျေးဇူးဂုဏ်နှင့်လည်း ပြည့်စုံသည်ကိုလူငယ်လူလတ်များ သိစေ လိုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့သည် ၀ိပဿနာတရားတော်ကို အသက် တော်တော်လေးကြီးမှ အားထုတ်ရမည်ဟု လွှဲမှားစွာ ယုံကြည်နေကြ သည်ကို ၀မ်းနည်းဖွယ်ရာ တွေ့ရသည်။
အယူအဆမှားလျှင် အတွေးအခေါ်ပါ မှားယွင်းလာပြီင်္း-
ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအတွက် ရရှိအပ် ခံစားအပ်သော အခွင့်အရေး များစွာကို လက်လွတ် ဆုံးရှုံး ကြရမည်။
ယနေ့ သိပံ္ပပညာရှင်များ ရှာဖွေတွေ့ရှိ၍ ၊ ယခုမှသိသိလာသော အကြောင်းအရာများကို မြတ်ဗုဒ္ဓသည် လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၅၀ကျော်ကတည်းက သိရှိခဲ့သည်။
ယနေ့ခေတ် အလွန်ထိပ်တန်းကျသည့် အတော့်ကို အတော်ဆုံးဖြစ်ပါသည်ဟု ဆိုသော သိပံ္ပ ပညာရှင်များ မသိသေး သည်ကိုလည်း မြတ်ဗုဒ္ဓက သိရှိဟောကြား ထားခဲ့ပြီးဖြစ်သည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓဟောကြားခဲ့သော ပိဋိကတ်(၃)ပုံမှ စင်္ကြ၀ဠာနှင့်ဆိုင်ရာ ဒြပ်များဆိုင်ရာ တရား တော် များ ကို စုဆောင်း၍ သီဟိုဠ်ကျွန်း ဆရာတော် (ဘီ၊ အနန္ဒာ မိုက်ထရေယ နာယက ထေရော ) ၁၉၅၇ ခုနှစ်က ပြုစုသည့် တရားတော်များကို ဆရာကြီး သခင်ဘသောင်းက ဗုဒ္ဓ၏စက်ြဝဠာတရား-ဟု၁၉၇၅ခုနှစ်က ဘာသာပြန် ထုတ်ဝေ ခဲ့သည်။
ယင်းသို့ဆိုလျှင် ထိုမျှတန်ဖိုးရှိ၍နက်နဲသော တရားတော်များကို (ကျင့်သုံး လိုက်နာလျှင်လည်း အမှန် တကယ်ချမ်းသာမှု ရစေမည့် တရားတော်များကို) အိုကြီးအိုမ ဉာဏ်တွေထိုင်းမှိုင်းကာမှ သင်ယူ လျှင်ရော အမှန် တကယ် တတ်မြောက်နိုင်ပါတော့ မည်လော။
အလွန်ပညာဉာဏ်ထက်ကာ သတိကောင်းသော ရာနှုံးနည်းပါးသည့် လူကြီးလူအိုအနည်းစုတော့ သဘော ပေါက် ကောင်း ပေါက်နိုင်မည် ဖြစ်သော်လည်း အများစု လူကြီးလူအိုများအတွက်မူ သင့် လျော် မလျော် စာဖတ်သူတို့ စဉ်းစားကြရန် သာဖြစ်ပါသည်။
လွန်ခဲ့သော နှစ်ပေါင်း ၂၅၅၀ ကျော်က မြတ်ဗုဒ္ဓက စက်ြဝဠာ အနန္တရှိသည်ဟု တရားတပုဒ် ဟော ရာ တွင် ပင် မည်မျှ အတိုက်အခံလုပ်၍ ဟောရမည်ကို ယနေ့ ကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားကြည့်နိုင်သည်။
လွန်ခဲ့သောနှစ်ပေါင်း ၂၅၅၀ကျော်က လူသားတို့သည် စက်ြဝဠာကိုအသာထား မိမိတို့နေထိုင်ရာ ကမ္ဘာ ကြီးအကြောင်းပင် ကောင်းကောင်းမသိခဲ့ကြ၊ သိနိုင်လောက်သော သိပံ္ပပညာလည်းမရှိသော ထိုသူများ ယုံကြည်ရန် အတော်ခက် လိမ့်မည်။ သို့သော် မြတ်ဗုဒ္ဓကမူ အရှိတရား၊ အမှန်တရားကို ဟော ကြားခဲ့သည်။
ယနေ့ ၂၁ ရာစု ထိပ်တန်းကျသော နက္ခတ္တဗေဒပညာရှင်များ မှန်ပြောင်းကောင်းကောင်း ထုတ်လုပ်နိုင်လေ ဂြိုဟ်သစ် ကြယ်သစ်များ တွေ့ရှိလေ ဖြစ်နေသည်ကိုလည်း သတိထားသင့်သည်။
မြင်မှသိသော အသိတရားနှင့် မမြင်သော်လည်းသိသောပညာကားမနှိုင်းအပ်ရာသည်သာတည်း။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် ဉာဏ်တော်ဖြင့်ဟောကြား၍ –
သိပံ္ပပညာရှင်များကမူ Trial and error method ဖြင့်သာအသစ်အဆန်းကို ရှာဖွေ တွေ့ရှိကြရသည်။
စက်ြဝဠာရှိလူသားသည် စကြ်ာဝဠာ၏အစုဝင် တစ်ယောက်ဖြစ်သည်။ ထိုလူသားသည် သူ့အကြောင်းကို သူအလုံးစုံ သိသောအခါ စက်ြဝဠာကိုလည်း သိပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်။
သင် မည်သို့ယူဆသနည်း။ လက်ခံနိုင်ပါ၏လော။
ယနေ့သိပံ္ပပညာရှင်များလက်ခံ ယုံကြည် အသုံးချနေသော သီအိုရီတစ်ခုကို ပြောပြလိုပါသည်။ ဒေါ်လတန် ၏အက်တမ်သီအိုရီတွင်-
အရာဝတ္တုဟူသမျှကို အက်တမ်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည်။ ဒြပ်တစ်ခု၏အသေး ငယ်ဆုံးအစိပ်အပိုင်းကို အက်တမ် ဟုခေါ်သည်ဟု ဆိုသည်။
ရွှေ၏ဂုဏ်သတ္တိကိုလေ့လာလိုလျှင် ရွှေအက်တမ်ကို လေ့လာခြင်းအားဖြင့် အလုံးစုံ သိမြင်ကြသည်။
ထိုသို့ဆိုလျှင် စကြ်ာဝဠာအစုဝင်ဖြစ်သည့် လူသားတစ်ဦးသည် သူ့အကြောင်းသူ အလုံးစုံသိလျှင် စက်ြဝဠာ ကိုပါ သိနိုင်သည်ဆိုသော အဆိုကို သင်စေ့စပ်သေချာစွာတွေး၍ သင်ကိုယ် တိုင် ကောက်ချက်ချနိုင်ကောင်းပါ၏။
စက်ြဝဠာအစုအဝေးတစ်ခုဖြစ်သော ကမ္ဘာတွင် သစ်ပင် တော တောင် ရေ မြေဟူသော သက်မဲ့များနှင့် လူနှင့်တိရစ္ဆာန် ဟူသော သက်ရှိသတ္တ၀ါများရှိကြသည်။
လူနှင့်တိရစ္ဆာန်တွင် လူသည် အလွန်ဉာဏ်ရည်ပြည့်စုံသည်။
ထိုလူသည် သူ့အကြောင်းသူ အလုံးစုံသိအောင်လုပ်နိုင်သော ပညာကို သင်ယူတတ်မြောက်၍ သိခဲ့သော်၊ စက်ြဝဠာ အကြောင်း သိနိုင်ရန် ၀န်မလေးတော့။ သို့သော် ထိုပညာကို လူတိုင်း သိနိုင်ပါသလော။
ပညာတစ်ရပ်ကို ဆရာထံမှ(မြင်ဆရာ၊ကြားဆရာ) မသင်ယူပဲ၊ ကိုယ်တိုင်တတ်မြောက်ရန်မှာ လွန်စွာ ခက် ခဲ ပေလိမ့်မည်။ အတန်းကျောင်း“သညာ” ၊စားဝတ် နေရေး၊စီးပွါးရေး“သညာ”များကိုပင် သင်ပေး သူက သင် ပေး သည့် တိုင် ခံယူသူကို လိုက်၍ ကွဲပြားခြားနားကြသေးသည်။
မြတ်ဗုဒ္ဓသည် မိမိကိုယ်ကို မိမိအလုံးစုံ သိမြင်သောအခါ စက်ြဝဠာကိုလည်း ခြေဆန့်စရာမလိုပဲ သိခဲ့သည်။
လူသားတိုင်း ခံစားကြရသော သောက ဒုက္ခ (လောဘမီး၊ ဒေါသမီးတို့၏ လောင်ကျွမ်းခံရခြင်း) အပေါင်းမှ လွတ်မြောက် ခဲ့သည်။
ထို မိမိကိုယ်ကို သိစေသော တရားတော်ကား “၀ိပဿနာ” တရားတော်ပေတည်း။
ကျွန်ုပ်တို့ ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များသည် ထို အလွန်မြင့်မား မြင့်မြတ်လှသောတရားတော်များနှင့် အူဝဲမှသည် သုသာန်ကြား အတူနေထိုင်ခဲ့ကြသော်လည်း ထိုတရားတော်များ၏ တန်ဘိုးကိုသိ၍ ကျင့်ကြံအားထုတ်နိုင်သူကား လွန်စွာနည်းလှသည်။ ၀မ်းနည်း ဖွယ်ရာပင်။
၀ိပဿနာတရားတော်ကို ကောင်းစွာသိ၍ ကျင့်ကြံအားထုတ်သောကြောင့် သံသရာ ဆင်းရဲဒုက္ခမှ လွတ် မြောက်ခဲ့သည့် ရဟန္တာပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများ မြန်မာပြည် တွင် အထင်အရှားရှိသည်။
သံသရာမှလွတ်မြောက်ရန်ဆိုသော အဆင့်ကို ခေတ္တထား၍
၀ိပဿနာတရားတော်ကျေးဇူးကြောင့် ပစ္စုပ္ပန်ဘ၀တွင်ပင် အောင်မြင်ခဲ့သော လူပုဂ္ဂိုလ်များလည်း အထင် အရှားရှိသည်။
ကမ္ဘာ့ကုလသမဂ္ဂ၏ အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်ဖြစ်ခဲ့၍ တတိယကမ္ဘာစစ်မီးကြီး မလောင် အောင် စွမ်းဆောင် ကာကွယ်နိုင်ခဲ့သော ဦးသန့်သည်လည်းကောင်း၊
သာမန်လူတစ်ယောက်ဖြစ်သော်လည်း မြန်မာနိုင်ငံ၏လွန်စွာ အရေးပါ အရေးကြီးသော ဋ္ဌာနကြီး(၄)ခုကို တာဝန်ယူ၍ အောင်မြင်အောင် ထမ်းဆောင်နိုင်စွမ်းခဲ့သော ဆရာကြီးဦးဘခင် (အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာဝိပဿနာ ကမ္မဋ္ဌာန်း ရိပ်သာ စတင်ခဲ့သူ) သည် လည်းကောင်း၊
ယနေ့လူငယ်များ ကိုယ်တွေ့မျက်မြင် ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံး လှိုင်ဂူဘုရားကြီးကို တည်၍၊ တကမ္ဘာလုံး ၀ိပဿနာတရားပြကာ လွန်စွာကြီးလေး များပြားလှသော တာဝန်ကြီးများကို ထမ်းဆောင်နေသည့် ဆရာကြီး ဂုရုကြီး ဦးဂိုအင်ကာသည် လည်းကောင်း၊
၀ိပဿနာတရားတော်၏ အစွမ်းဖြင့် လွန်စွာကြီးသော (သာမန်လူတို့ဖြစ်နိုင်မည်မထင်သော) တာဝန် ကြီး များ ကို ထမ်းဆောင်နေသည့် ပုဂ္ဂိုလ်များဖြစ်သည်။
သဘောပေါက်အောင် နာယူရမည်။ (လွန်စွာနက်နဲသော တရားများဖြစ်သောကြောင့်)
ကျင့်နိုင်စွမ်းရှိရမည်။ (အရွယ်၏ကောင်းခြင်းသည် အလွန်အရေးပါသည်)
သင်သည် လူငယ်လူလတ်ဖြစ်ခဲ့သော် ၀ိပဿနာတရားအားထုတ်ရန် လွန်စွာသင့်လျော်သော အရွယ် ဖြစ် ပေလိမ့်မည်။
ယနေ့ကမ္ဘာတွင် လူဦးရေ သန်း-၆၅၀၀ကျော်ရှိသည်။
ထိုဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များအနက်မှ ဘုရားဖြစ်ရေးဖက် အားသန်သော မဟာယနပေါင်း များစွာ နှုတ်ပါယ်သော်-
၀ိပဿနာတရားအစစ်အမှန်ကို သိခွင့် အားထုတ်ခွင့်ရှိသော သူမှာမူ လွန်စွာနည်းပါး သည်။
သင့်အကြောင်း သင်သိပြီးနောက်၊ စကြ်ာဝဠာပါ ထွင်းဖောက် သိနိုင်သောဉာဏ်ကို သင့်မှာရနိုင်သော အခွင့်အရေး ရှိပြီဆိုလျှင် သင်ဝမ်းမြောက် ၀မ်းသာ မဖြစ်သင့်ပါသလော။
ယခုမှာကား နိဒါန်းသာ ဖြစ်ပေသည်။ ကျွန်ုပ်တတ်သိနားလည်သမျှ (ဘုရားဟောတရားများ)ကို လူငယ်လူလတ်များ ရှင်းလင်းစွာ သိရှိခွင့်ရရန် ဆက်လက်တင်ပြသွားမည်ဖြစ်ပါသည်။
Ei Ei Kyaw said,
ဆရာ့ရဲ့ ယခု ဆောင်းပါးရှည်ဖြစ်သော “မြတ်ဗုဒ္ဓ၏၀ိပသ၁နာတရားတော်နှင့် လူငယ်လူလတ်”အား ကျွန်မတို့ရဲ့ အပ္ပမာဒ ဓမ္မရသမဂ္ဂဇင်းတွင် ၂၀၁၃ခုနှစ် မေလမှစ၍ အခန်းဆက်ဆောင်းပါးအဖြစ် လစဉ် ဖော်ပြထားပါသည်။ ဆရာ သို့မဟုတ် ဆရာနှင့် ပတ်သက်သောသူများအား အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်ရန် မတတ်နိုင်ခဲ့ပါသောကြောင့် ယခုလို ဆရာ့ blog ထဲဝင်၍ ဆက်သွယ်လိုက်ရပါသည်။ဆရာ၏ ဆောင်းပါးများအတွက် မဂ္ဂဇင်းလက်ဆောင်နှင့်အတူ စာမူခ ချီးမြှင့်လိုပါသောကြောင့် ကျေးဇူးပြု၍ မဂ္ဂဇင်းတိုက်သို့ ပြန်လည် ဆက်သွယ်ပေးပါရန် လေးစားစွာ အကြောင်းကြားအပ်ပါသည်။
အပ္ပမာဒ ဓမ္မရသမဂ္ဂဇင်း အယ်ဒီတာအဖွဲ့
အိမ်အမှတ် (၄၆)။ ရတနာပုံလမ်း၊ (၃၂)တိုးချဲ့ရပ်ကွက်၊ ဒဂုံမြို့သစ်မြောက်ပိုင်း။ ရန်ကုန်မြို့။
ဒကာကြီးဆောင်းပါးတွေကို အချိန်ယူပြီးဖတ်နေပါတယ်။ ဆောင်ပါးတွေကိုဖတ်တဲ့အခါ မသိသေးတဲ့ဓမ္မစကားတွေကိုသိရလို့ ဝမ်းသာနေမိတယ်။ ဆောင်းပါးတွေက ဗုဒ္ဓတရားတော်ကိုခေတ်
အမြင်နဲ့ လေ့လာသုံးသတ်တင်ပြထားတဲ့အတွက် တော်တော်ကောင်းပါတယ်။ ဦးဇင်းလည်းဗဟုသုတတွေတော်တော်များများရမိတယ်။ လူငယ်၊ လူလတ်၊ လူကြီး
Thet Oo said,
အလွန်ကောင်းမွန်သော စိတ်ကူးနှင့် အရေးအသားဖြစ်ပေသည်။
I think u want to tell that youths should study and practice the religion and the vocational life simultaneously. Saya Paragu have said Dhamma or the way of living. Thank u for this knowledgeable article.
Nay Lin said,
U Aye Chit EEAC said,
Thanks for your article especially dedicated to young people.I will share it to my students and friends as much as I can.Please keep on writing articles like this.Thanks again for sharing your valuable knowledge to youths and me.
U Aye Chit EEAC